July 22, 2021 161
हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको लागि सुत्नु अत्यावश्यक छ । तर सुताइका पनि नियम छन् । सुत्दा जहिले पनि भोजन गरेको २ घण्टाभन्दा पछि मात्र सुत्नु पर्छ ।
सुत्ने समयमा जहिले पनि सकारात्मक सोंच राख्नु पर्छ । सुत्नु अघि दिशा पिसाव पनि गरिसक्नु पर्छ । हात खुट्टा धोएर राम्रोसँग पुछेर मात्र सुत्नु पर्छ । सयन कक्षमा भगवानका चित्र हुनु राम्रो मानिन्छ । सूर्योदय भन्दा अघि नै उठिसक्नु पर्छ ।
Prev२ दिन भित्रमा सोचेको काम बन्नेछ, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं
Nextविहिवार विहान काठमाडौको सडकमा देखिएको अनौठो दृष्य, जसले सबैलाई अचम्म बनायो !
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको राजीनामा ….?